eParewa || Peace and Prosperity » लक्ष्मी आचार्यको पत्रिकामा छापिएको बिबादित तस्बिर (भिडियो सहित)
लक्ष्मी आचार्यको पत्रिकामा छापिएको बिबादित तस्बिर (भिडियो सहित)
२०७५ चैत १३ गते बुधबार ११:४६
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा गायिका तथा मोडल लक्ष्मी आचार्यको एक तस्बिर भाइरल भएको छ । तस्बिरका कारणले उनले निकै आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । शुक्रवार साप्ताहिक पत्रिकाले धेरै पहिले ब्लोअपमा प्रकाशन गरेको उक्त तस्बिरमा गायिका...
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा गायिका तथा मोडल लक्ष्मी आचार्यको एक तस्बिर भाइरल भएको छ । तस्बिरका कारणले उनले निकै आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । शुक्रवार साप्ताहिक पत्रिकाले धेरै पहिले ब्लोअपमा प्रकाशन गरेको उक्त तस्बिरमा गायिका आर्चायलाई न्यूड देख्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढिरहेको छ । यस्तो बेला उत्तेजक तस्बिर प्रकाश गर्नु र तस्बिर खिचाउनु दुबै गलत भएको धारण सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले राखिरहेका छन् । तस्बिर खिच्ने, प्रकाशन गर्ने र खिचाउने सबै गलत भन्दै उनीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने समेतको विचार समेत सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले पोखिरहेका छन् ।
कहिले छापियो तस्बिर ?
अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर हालै प्रकाशित भए जसरी प्रचार गरिएको छ । तर, गायिका आचार्यको भाइरल तस्बिर २०७४ असोज २७ गते बिहिबार प्रकाशित शुक्रबार साप्ताहिमा छापिएको हो । शुक्रबार सुन्दरीको रुपमा ब्लोअप पेजमा सहायक तस्बिरको रुपमा यो छापिएको छ । ब्लोअपको मेन तस्बिरको रुपमा अर्कै तस्बिर छापिएको छ । मुख्य ब्लोअपमा बक्षस्थलमा ओम लेखिएको ट्याुट भएको तस्बिर छापिएको छ । तस्बिर रमेश दुवालले खिचेका हुन् ।
तस्बिरमा के छ ?
भाइरल तस्बिरमा आचार्य न्यूड देखिएकी छन् । कुकुर काखमा राखेर मोडलिङ शैलीमा खिचिएको तस्बिरमा गोप्य अंग उक्त कुकुरले छोपिएको छ ।
के भन्छिन् लक्ष्मी
आफ्नो तस्बिरलाई अहिले गलत तरिकाले प्रचार गरिएको आचार्य बताउँछिन् । शुक्रबार साप्ताहिकले बदनियतपूर्ण तरिकाले आफ्नो तस्बिर सम्पादन गरी छापेर पत्रिका चलाउन खोजेको समेत उनको आरोप रहेको छ । पत्रिकाले सो तस्बिर नसोधी छापेको दाबी गर्दै उनले चर्चाको लागि आफूलाई दुरुपयोग गरेको बताइन् । शुक्रबारमा यस्तो प्रकृतिको तस्बिर आएको कुरा आफूलाई धेरैपछि मात्रै जानकारी भएको उनको भनाई रहेको छ । सोही तस्बिर अहिले भाइरल भएपछि आफूलाई तनाव बढेको उनले रातोपाटीसँग बताइन् । ‘तस्बिरका कारण देश विदेशबाट फोनहरु आइरहेका छन् । राम्रा नराम्रा कुराको सामाना गर्नु परिरहेको छ’ उनले भनिन् ‘निकै लामो संघर्ष र मेहनतले कलाकारितामा बनाएको नाम यसले धमिल्याउन सक्छ ।’
‘ठूलो संर्घष र त्यागका साथ कलाकारितामा म खुट्टा अड्याउन सफल भएकी हुँ’ उनले थपिन् । आचार्यको तस्बिरलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमामा बलात्कारको विभिन्न घटनासँग पनि जोडेर चर्चा भइरहेका छन् । यसले आफूलाई निकै दुःख पुगेको र शनिबार दिनभर रोएको उनले बताइन् । विगत दुई महिनादेखि घरको कामले गर्दा आफू सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर रहेको बताउँदै उनले जानकारीबिनै छापिएको पुरानो तस्बिरलाई अहिले विवादको विषय नबनाउन आग्रह गरिन् । यो समाचार केही समय अघि रातोपाटी डटकममा लेखिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०७५ चैत १३ गते बुधबार ११:४६